Let's Go and Walk to Our Brighten Future.: မြန်မာအနောက်ပိုင်း မုန်တိုင်းကြောင့်ရေကြီးနိုင် NASA သတိပေး
မြန်မာအနောက်ပိုင်း မုန်တိုင်းကြောင့်ရေကြီးနိုင် NASA သတိပေး
ဘီဂျလီ လေပြင်းမုန်တိုင်းဟာ စနေနေ့ မနက်ပိုင်းစောစောပိုင်းမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ စစ်တကောင်းမြို့နားက ဖြတ်ကျော်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ချင်းပြည်နယ်ထဲကို ၀င်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ်ကနေ ဒီမုန်တိုင်းဟာ တဖြည်းဖြည်း အားပျော့လာနိုင်ဖွယ်ရှိပြီး စစ်ကိုင်းတိုင်းကို ဖြတ်ပြီး တနင်္ဂနွေနေ့မှာ တရုတ်နိုင်ငံထဲကို ၀င်ရောက်ဖို့ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မုန်တိုင်းသွားရာ လမ်းကြောင်းတလျောက်မှာ ရေကြီးမယ့်အန္တရာယ်ကို သတိထားကြဖို့ အမေရိကန် အာကာသလေ့လာရေး နာဆာအဖွဲ့ရဲ့ မုန်တိုင်းလေ့လာစောင့်ကြည့်နေသူက ပြောပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို ဒေါ်ခင်မျိုးသက်က တင်ပြထားပါတယ်။
ဆိုင်ကလုန်း ဘီဂျလီ ဟာ စနေနေ့မနက်ပိုင်းမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ စစ်တကောင်းနားကနေ ဖြတ်ကျော်ပြီး အရှေ့မြောက်အရပ်ကို ဦးတည်ရွေ့လျား သွားနေရာကနေ မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်းကိုအ၀င်မှာ အရှိန်အနည်းငယ် လျော့ပါးသွားမယ်လို့ အင်တာနက် ကမ္ဘာ့ရာသီဥတု စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ Iccuweather က ပြောပါတယ်။ ဒီမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ရာ လမ်းကြောင်းတလျှောက်မှာ မိုးရေချိန် လက်မ ၁၀ လက်မအထက်မှာ ရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဘက် ကမ်းရိုးတန်း နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တောင်ပိုင်းက ပင်လယ်ပြင်မှာ လှိုင်းလုံးတွေဟာ အမြင့်ပေ ၃ ပေကနေ ၆ ပေအထိ စနေနေ့တွေမှာ ရှိနေနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကွက်ကျား လေဆင်နှာမောင်း တိုက်ခတ်မှုတွေလည်း ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
မြန်မာစံတော်ချိန် စနေနေ့မနက် ၃ နာရီအချိန်က ထုတ်ပြန်တဲ့ ဟာဝိုင်အီ ကျွန်းက Pearl Harbor မှာရှိတဲ့ အမေရိကန်ရေတပ် ပူးတွဲ မုန်တိုင်းသတိပေးရေး ဗဟိုဌာနရဲ့ မုန်တိုင်းသတိပေးချက်ထဲမှာလည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ ကုန်တွင်းပိုင်းထဲ ၀င်ရောက် သွားတဲ့ မုန်တိုင်း ဘီဂျလီ ဟာ အတော်ကို အားပျော့သွားမယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကနေ အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကို ဖြတ်ကျော်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံထဲ ၀င်ရောက်ချိန်မှာ သတိပေးရမယ့် ပြင်းအားအဆင့် ၃၅ နော့ခ်ျ မှာ မရှိတော့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီသတိပေးချက်ဟာ နောက်ဆုံးသတိပေးချက်လို့လည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ အမေရိကန် အာကာသလေ့လာရေး နာဆာ ရဲ့ ဂေါဒက် (Goddard) မုန်တိုင်းစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ တာဝန်ခံ ရောဘတ် ဂူထရို (Robert Gutro) ကတော့ မုန်တိုင်းရဲ့ပြင်းအား လျော့ပါးသွားပေမယ့် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေဟာ ပြင်းထန်တာမို့ ရေကြီးမယ့်အန္တရာယ်ကို သတိထားသင့်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“နာဆာ နဲ့ ဂျပန် အာကာသ အေဂျင်စီတို့ရဲ့ TRMM ဂြိုလ်တု တိုင်းတာရေးအရဆိုရင် အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်း ဘီဂျလီ ဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသ နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာ မိုးကြီးစေနိုင်ပါတယ်။ အခုလောလောဆယ် တနာရီကို ၂ လက်မနှုန်းနဲ့ ရွာနေတဲ့အပြင် ပင်လယ်ပြင်မှာလည်း လှိုင်းကြီးတာမိုလို့ ကမ်းရိုးတန်းဒေသမှာ နေသူတွေအတွက် ရေကြီးမယ့် အန္တရာယ်ကို သတိထားသင့်ပါတယ်။ တောင်တန်းဒေသတွေမှာတော့ မိုးကြီးလို့ မြေပြိုမယ့် အန္တရာယ် ရှိနေပြီး မုန်တိုင်းဖြတ်သန်းတဲ့အချိန်တွေမှာ ခရီးမသွားသင့်ပါတယ်။”
နာဆာ အာကာသ သိပ္ပံယာဉ် အပူပိုင်းဒေသ မုန်တိုင်းစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ တာဝန်ခံ ရောဘတ် ဂူထရို က ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by yahutha at 2:05 PM
Postcard from Beijing ဆိုပြီး attachment file နဲ့ ...
ဧပြီ ၂ရ ရက် ၂၀၀၉ သတင်းများ
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ရဲ့ ပထမနေ့ အစည်းအေ...
အချက်သုံးချက်ကို လိုက်လျောရင် NLD ရွေးကောက်ပွဲဝင်မ...
ကြောက်စရာ ၀က်တုပ်ကွေးရောဂါ သတင်း နှင့် ကာကွယ်ရန်အခ...
IC LIVE TOUR IN Japan အောင်မြင်စွာပြီစီးခြင်း
North Korean Artist Sun Mu ၏ပုံရိပ်များ
ဂူးဂဲလ်၊ ဂျီတော့ခ် (ဂျီမေးလ်) အကြောင်း တစေ့တစောင်း...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိင်ငံရေးအကျဉ်းသား များအမြ...
စစ်အစိုးရကို ပိုဖိအားပေးရေး အမေရိကန် လွှတ်တော်အမတ်ေ...
ဂျပန်သတင်းထောက် အသတ်ခံရသည့် ပူလီဇာဆုရ ဓါတ်ပုံ သတင်...
မြန်မာအနောက်ပိုင်း မုန်တိုင်းကြောင့်ရေကြီးနိုင် NA...
Bijli Slams Into Bangladesh Updated: Friday, Apri...
Bijli Threatens Myanmar, Bangladesh Tropical Cyc...
Tropical Cyclone Bijli
Cyclone "Bijli" on 16 Apr 09
လှိုင်းလုံး ၁၃ ပေကြီးမယ်တဲ့ ..လက်လှမ်းမှီရာ သတိပေး...
အမေရိကန် နှင့်နိုင်ငံသားပေါ် ကယ်တင်ပုံ
၁၈ ကြိမ်မြောက် အတာသင်္ကြန်ပွဲတော် တိုကျို၊ဂျပန်၌ စည်...
Voice of Burma Issue No.704 April 2009
နအဖ စစ်အစိုးရသို့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများမှ အိတ်...
(၆၄) ကြိမ်မြောက် ဖက်ဆစ်တပ်မတော်နေ(့၂၇.၃.၂၀၀၉)
Email နှင့် Gtalk လုံခြုံ်ရေး...
မြန်မာပြည်သားစာစောင် ဧပြီ ၂၀၀၉
မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဧ...
ပြည်တွင်း လှို့ ဝှက် radio အစီအစဉ် (ပြည်သူနားတွေ ပ...
Burma again chastised for lack of religious freedo...
ကမ္ဘာ့အဆိုးရွားဆုံး ခေါင်းဆောင်များ စာရင်း
ဘန်ကောက်မှာ အတွေ့အကြုံသစ်တွေ ရသွားတဲ့ လေးဖြူနဲ့ IC...
(မေ ၃၀) ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှု ကြီး (၇၀)လ ပြည့်် ၀မ်း...